ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမေးများဆုံးမေးခွန်း (၇)ခု | Curiosity Science Magazine
ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမေးများဆုံးမေးခွန်း (၇)ခု
August 15, 2016 · by Thaw Zin Htun	· in Physical Science.	·
ကျွန်တော် ရီလေတီဗတီသီအိုရီ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အရင်တစ်ပတ်က “အချိန်-ဟင်းလင်းပြင် (သို့ မဟုတ်) ရီလေတီဗတီသို့ ခြေလှမ်း စတင်ခြင်း” ဆိုတဲ့အမည် နဲ့ ဆောင်းပါးရှည်တစ်ပုဒ်ရေးသားခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီဆောင်းပါး ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ သူငယ်ချင်းတွေကကော ၊ စာဖတ်သူတွေက ပါ ဆောင်းပါးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးမေးခွန်းတွေ မေးကြပါတယ် ။ အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကို စုထားပြီးတော့ ကျွန်တော် အခု လ မှာ ဆောင်းပါးအနေနဲ့ ပြန်ပြီးစုဆောင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ် ။ ဒီဆောင်းပါး ကို သီးသန့် ဖတ်မယ်ဆိုလဲ ရပါတယ် ။ အရင် လ မှာပါခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့ဆက်စပ်ပြီးဖတ်ရင် ပိုလို့ ကောင်းပါတယ် ။
မေးခွန်း (၁)းအလျင်များများနဲ့ သွားတဲ့အခါမှာ ဒြပ်ထုတိုးလာတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာပါလဲ ။
ဒီမေးခွန်း ကို ဖြေဖို့ ဆိုရင် အရင်ဆုံး ကျွန်တော် Intrinsic Mass နဲ့Relativistic Mass နှစ်ခုရဲ့ ကွာခြားချက်ကို အရင်ပြောပြချင်ပါတယ် ။ ဒြပ်ထု ကို Newton တို့Galileo တို့ ဟာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ ပြောင်းလဲပစ်လို့ မရနိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတစ်ခု လို့ သတ်မှတ်ခဲ့တာပေါ့ ။ Einstein ပေါ်မလာခင်ထိ တော့ ဒါကိုဆက်သုံးနေကြတယ် ။ ( တကယ်က Lorentz က စပြီး သဘောတရားကိုချပြခဲ့တာပါ ။ ) အိုင်စတိုင်း က တော့ သူ့ရဲ့အထူးရီလေတီဗတီ သီအိုရီ မှာ Newton တို့ရဲ့ ဒြပ် သဘောတရားကို ရပ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအတွက် ဆက်သုံးတယ် ။ ရပ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲု့ဒြပ်ထု ကို mo ( Inertial Mass, Rest Mass , Invariant Mass, Intrinsic Mass အမျိုးမျိုးခေါ်ကြသည်။ ) ဒါပေမဲ့ သွားလာနေတဲ့ဝတ္ထုတွေအတွက်တော့ အလျှင်ပြောင်းလဲခြင်းဆက်သွယ်ချက်ဟာ ၀တ္ထုရဲ့အရှိန် . ပြီးတော့ သက်ေ၇ာက်အား နဲ့သွားနေတဲ့ ဦးတည်ချက် ကြားက ထောင့်တို့ ပေါ်မူတည်သွားပါပြီ ။ ဒြပ်ထုဟာ အလျှင်ပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲလာပါပြီ ။ သူ့ ကို Relativistic Mass (m) လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ အဲ့ နှစ်ခုကြားက ဆက်သွယ် ချက်ကတော့
မေးခွန်း(၂)းဒါဆိုရင်အလျင်များတာနဲ့ဒြပ်ထုတိုးလာရမယ်ဆိုရင် ဘာလို့ အသံအလျှင်ထက်မြန်တဲ့ ဂျက်လေယာဉ်တွေဟာ ဒြပ်ထုတိုးမလာ ရတာပါလဲ ?
တကယ်လို့ အလျှင်တစ်ခုမှသွားနေတဲ့ အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ဒြပ်ထုဘယ်လောက်တိုးလာလဲဆိုတာသိချင်ရင်အပေါ်ကညီမျှခြင်းလေးနဲ့ ရိုးရိုးလေးတွေကလို့ ရပါတယ် ။ ဥပမာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တွက်ပြမယ် နော် ။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သူ့ ရဲ့ ဒြပ်ထုက ၇၀ ကီလိုရှိပါတယ်တဲ့ ။ သူ ဟာ အသံရဲ့ အလျှင်နဲ့ သွားတယ်လို့ သဘောထားကြည့်ပါ ။ အဲ့တာဆို သူ့ ရဲ့အလျှင် ဟာ 344 m/s ပေါ့ ။ ခုနက ညီမျှခြင်းရဲ့ mo နေရာမှာ ၇၀ ထဲ့ ။ v နေရာမှာ 344 ထဲ့ ၊ c နေရာမှာ3x 10^8 ကိုထဲ့ပြီးတွက်လိုက်ရင် ရတဲ့ဖြေဟာ ၇၀.၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၁ လောက်ပဲရှိပါတယ် ။ ( Calculator မှာတွက်မယ်ဆိုရင် ၇၀ လို့ ပဲပြလိုက်ပါ့မယ်။) ဘာလို့ ဆိုတိုးလာတဲ့ဒြပ်ထုဟာလုံးဝလုံးဝ လုံးဝ ကိုမသိသာလို့ ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
မေးခွန်း (၃)းအလင်းအလျှင်နဲ့ သွားတာကကော ဘာလို့ မဖြစ်နိုင် ရတာလဲ ?
ဒီ ညီမျှခြင်းဟာ အသံအလျှင်လောက် မှာ အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး ။ အလင်းအလျှင်လောက်နီးပါးကြီးတဲ့ အလျှင်တွေမှသာ သိသာပါတယ် ။ အလင်းအလျှင်ရဲ့ ဆယ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ တွက်ကြည့်ရအောင် ။ အဲ့ဒီတော့ v နေရာမှာ3x 10^7 ကိုအစားထိုး (ကျန်တာတွေကတော့တူတူပဲ ) တွက်လို့ လို့ ရှိရင် m ဟာ ၇၀.၃၅ ကီလိုဂရမ် ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ ရပါလိမ့်မယ် ။ နဂိုထဲ ၀.၃၅ ပဲတိုးလာပါသေးတယ် ။ ဒါတောင်အလင်းအလျှင်ရဲ့ဆယ်ပုံတစ်ပုံနော် ။ လက်ရှိဘယ်သူမှမသွားနိုင်သေးတဲ့အလျှင် ။ အဲ့မှာတောင် အဲ့လောက်လေးပဲတိုးပါတယ် ။ ကဲ အလင်းအလျှင်နဲ့ ကပ်ကြည့်၇အောင် ။v နေရာမှာ 2.9999 x10^7 နဲ့ တွက်မယ် ။ အဲ့အချိန်မှာတွက်ထုတ်လိုက်ရင် m ဟာ ၈၅၇၃.၂၈ ကီလိုဂ၇မ် ဖြစ်သွားပါပြီ ။ နဂိုထက်အဆ ၁၂၀ တောင်ဖြစ်သွားပါပြီ ။ နဲနဲလေးထပ်တိုးကြည့်ရအောင် ။ 2.999999 x 10^8 နဲ့ သွားကြည့်တာပေါ့ ။ ၈၅၇၃၂.၁၄ ဖြစ်သွားပါပီ။ နဂိုထက် အဆ ၁၂၀၀ တောင်ပါ ။ အဲ့ဒီလိုပဲ နောက်ကို9လေးတစ်ခုထပ်တိုးကြည့် အများကြီးထပ်တိုးနေဦးမှာပဲ ။အလင်းအလျှင်နားနီးလေလေ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဒြပ်ထုဟာတိုး လာ လေလေ ပါပဲ ။ သူ ဟာအချိုးညီ လှပစွာပြောင်းလာတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဥပမာပေးရရင် ဆယ်တန်း က မြန်မာစာ စာမေးပွဲတစ် မှာ အမှတ် ၅၀ ရဖို့သုံးနာရီစာကျက်ဖို့ လိုတယ်ထား ၊ ခင်ဗျားခြောက်နာရီ ကြိုးစားရင် အမှတ် ၁၀၀ မရပါဘူး ။ သုံးချက်တွက်နည်း နဲ့ တွက်လို့ မရပါဘူး ။ ခြောက်နာရီ ကြိုးစားရင် ခင်ဗျား အမှတ် ၆၀ လောက်ပဲရမယ် ။ အဲ့ ၁၂ နာရီကြိုးစားရင်တော့ ၇၅ မှတ်လောက်ရမယ် ။ တစ်ဖြည်းဖြည်း ၁၀၀ နားနီးကပ်ဖို့ ကြိုးစားလေလေ ပိုပိုပြီးခက်ခဲလာလေ ပါပဲ ။ အဲ့ဒီသဘောပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ3x 10^8 (အလင်းအလျှင်နဲ့ သွားကြည့်တာပေါ့ ) v ကို3x 10^8 ဆိုပြီးတွက်လိုက် တဲ့အခါမှာ ညီမျှခြင်းရဲ့ပိုင်းခြေဟာ သုညဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ။ ပိုင်းဝေ ဟာ ၇၀ ဖြစ်နေလိမ့်မယ် ။ ကိန်းတစ်ခုကို တည်ပြီး သုည နဲ့ စားတာ သင်္ချာမှာ Undefined ပါ ။ ရူပဗေဒ မှာ Infinity ဖြစ်ပါတယ် ။ ခင်ဗျားရဲ့ ဒြပ်ထုဟာ အနန္တကိန်း ဖြစ်သွားပါပြီ ။ တွက်ချက်လို့ မရတဲ့ကိန်း အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ကိန်းပါ ။ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ က အနန္တကိန်း လောက်ကြီးတဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ဒြပ်ထုအတွက် အန္တကိန်းလောက် ကြီးတဲ့ စွမ်းအင် လိုအပ်ပါတယ် ။ ( ဒြပ်ထု-စွမ်းအင် တည်မြဲခြင်းနိယာမ အရ စွမ်းအင်တင်လိုက်ကြီးလို့ မ၇ဘူး ။ ဒြပ်ထုပါလိုက်ကြီးမှရပါလိမ့်မယ် ။ စကြာဝဠာတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ စွမ်းအင်အကုန်ပေါင်းတောင် အနန္တစွမ်းအင် ကိုမရပါဘူး ။ ) ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မှာဒြပ်ထုဆိုတာရှိနေတဲ့အတွက် အလင်းအလျှင်နဲ့ ဘယ်တော့မှသွားလို့ မရတာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါဆိုခင်ဗျားတွေးမိမှာပေါ့ ။ အဲ့လောက်အလျှင်တွေနဲ့ မှမသွားနိုင်တာ ဒီညီမျှခြင်း ဒီသီအိုရီကြီးဟာမှန်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာ။ မှန်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဟာ ကားတွေ ဒုံးပျံတွေကိုတော့အလင်းအလျှင်နားကပ်တဲ့အလျှင်နဲ့ မသွားနိုင်သေးပါဘူး ။ဒါပေမဲ့ အမှုန်အရှိန်ပေးစက် (Particle Accelerator) တွေထဲမှာ အီလက်ထရွန်တွေကို အလင်းအလျှင်ရဲ့ ၉၀% ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတဲ့အလျှင်နဲ့ သွားခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်ပမာဏ သိသိသာသာကိုတက်လာတာမြင်ရပါတယ် ။ ထပ်ထပ်ပြီးနဲနဲလောက်မြှင့်လေလေ စွမ်းအင်ကပိုလိုအပ်လေပဲဖြစ်ပါတယ် ။
မေးခွန်း (၄)းအလင်းကျတော့ကော ဘာလို့ အလင်းအလျှင်နဲ့ သွား လို့ ရနေရတာလဲ ။
အလွယ်ဆုံးပြောရရင် သူ ရဲ့Rest mass သို့ Intrinsic Mass သို့နဂိုမူလ ရှိတဲ့ ဒြပ်ထု (mo) ဟာ သုညဖြစ်နေလို့ ပါ ။ အလင်းရဲ့ အမှုန် ( Photon ) တွေ ကို ဒြပ်ထုမရှိလောက်အောင် သေးငယ်တဲ့ အမှုန် (Massless Particle) ဖြစ်လို့ ပါ ။ ( Four-dimensional momentum တစ်ခုဟာ Null Vector ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အရာတစ်ခုကို ဒြပ်ထုမရှိသောအရာလို့ ခေါ်ပါတယ်။) အလွယ်သဘောအားဖြင့် သီအိုရီ အရ ဒြပ်ထုမရှိပါလို့ ပြောလို့ ရပါတယ် ။ အဲ့တော့ mo =0ပေါ့ ။ တကယ်ကတော့ ဒြပ်ထုမရှိတဲ့ အမှုန်တွေ ဟာ အရမ်းကိုနဲပါးပါတယ် ။ ခုထိလက်ရှိမှာ သိထားတာဆိုလို့Gauge bosons တွေရယ် ၊ Photon တွေရယ် ၊ Gluon တွေရယ် သုံးမျိုးပဲရှိသေးပါတယ် ။ mo =0, v =3x 10^8 m/s နဲ့ ထားပြီးတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ အဖြေဟာ 0/0 ထွက်လာပါတယ် ။ ဒီမှာတစ်ခုလေးပြောချင်ပါတယ် ။ ကိန်းတစ်ခု ကို တည်ပြီး သုည နဲ့ စားတာ ( 1/0, 2/0 , 70/0 etc ) ဟာ Undefined ( တွက်ချက်မရသော ၊ အဓိပ္ပာယ်မရှိသော ကိန်း ) ပါ ။ ဘာလို့ လဲ ။ အစားဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ကို စဉ်းစားကြည့် ။အညီအမျှခွဲဝေခြင်းသဘောမျိုးပါဘဲ ။ ၄ ကိုတည်ပြီး ၂ နဲ့ စားရင် ၂ ရပါတယ် ။ ၂ ကို ၂ နဲ့ မြှောက်ရင် ၄ ပြန်ရ ပါတယ် ။ ကဲ .. တစ်ကိုတည်ပြီး သုည နဲ့ စားရင် သုည ရတယ်လို့ ယူဆလိုက် ။ သုည နဲ့ သုည ပြန်မြှောက်ရင် ၁ မရ ပါ ။ သုည ကို တည်ပြီး သုည နဲ့ စားတာ (0/0) ဟာ Indeterminate ( ခန့် မှန်းမရသော ကိန်းတစ်ခု) ပါ ။ သူ့ တန်ဖိုးဟာ တစ်ခုရှိပါတယ် ။ သုည ကို တည်ပြီး သုည နဲ့ စားတာ ၁ ရတယ်လို့ ယူဆလိုက် ။ ၁ နဲ့ သုည နဲ့ မြှောက်တော့ သုည ပြန်ရတယ် ။ မှန်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ၂ ရတယ်လို့ ယူဆလိုက် ။ ၂ နဲ့ သုည နဲ့ မြှောက်တော့ သုည ပြန်ရတယ် ။ မှန်သေးတာပဲ ။ အဲ့ဒီတော့ ဆိုလိုချင်တာက သူတို့နှစ်ခုရဲ့ မြှောက်လဒ် ဟာ ဘယ်ကိန်းမဆိုဖြစ်နိုင်တယ် လို့ ပြောတာပါပဲ ။ခန့် မှန်းမရတာပါ ။ နှစ်ခုကိုတော်တေ်ာများများ တူတူပဲလို့ ထင်ကြပါတယ် ။ (ပုံ-၁ တွင်နှစ်ခုကိုခွဲခြားပြထားပါတယ်။ ) တကယ်က နှစ်ခုလုံးဝမတူပါဘူး ။
ပုံ – ၁းUndefined နဲ့Indeterminate ခွဲပြထားပုံ ။
မေးခွန်း (၅)းစကြာဝဠာတစ်ခုလုံးထဲမှာအလင်း ရဲ့ အလျှင်ထက်မြန်တာမရှိဘူးဆိုပြီး Black Hole တွေကျတော့ဘာလို့ အလင်းကိုစုပ်ယူလို့ ရနေတာလဲ ။
ခင်ဗျားလက်ထဲက ဘောလုံးလေးကို အလျားလိုက်ပစ်လိုက် ။ခင်ဗျားရှေ့ကိုအကွာအဝေးတစ်ခု ကိုကျရောက်သွားလိမ့်မယ် ။ အရှိန်လေးနဲနဲတင်ပြီးထပ်ပစ်လိုက် ။ ပိုဝေးဝေး ကိုရောက်သွားမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလား ။ ခင်ဗျားအရှိန်မြင့်မြင့်နဲ့ ပစ်ရင်ပစ်သလောက်ကိုအဲ့ဘောလုံးလေး ကရောက်မှာပဲလေ ။ Newton က ဒါကိုယူပြီးဘယ်လိုတွေးခဲ့လဲဆိုရင် တကယ်လို့ သာ ခင်ဗျားဟာလုံလောက်တဲ့အလျှင်တစ်ခုကို သုံးပြီးပစ်လိုက်လို့ ရှိရင် ကမ္ဘာကြီးဟာလုံးပြီး ကွေးနေတာကြောင့် ခင်ဗျားရဲနောက်စေ့ ကိုပြန်လာမှန်ပါပဲတဲ့ ။ အဲ့လိုနောက်စေ့ ကိုလာမှန်တဲ့အရှိန်ထက်မြင့်သွားပြီဆိုရင်တော့ အဲ့ဘောလုံးလေးဟာ ကမ္ဘာ့ရဲ့ ဆွဲငင်အား စက်ကွင်း ကိုဖောက်ထွက်ပြီး အာကာသ ထဲ ပျံသန်း သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီလို့ ကမ္ဘာ့ရဲ့ ဆွဲငင်အားစက်ကွင်း က လွှတ်ထွက်သွားဖို့ အတွက်လိုအပ်တဲ့အရှိန် (အလျှင်) ကို Escape Velocity လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ သူ့ ကိုတွက်လို့ ရတဲ့ ညီမျှခြင်းကတော့ –
, V,escape = Escape velocity , G = Universal Gravitational constant(6.67×10^−11 m3 kg−1 s−2) ,M = လွတ်မြောက်လိုတဲ့ ဂြိုဟ်ရဲ့ ဒြပ်ထု (Black Hole, ကြယ်အကုန်ဖြစ်နိုင်), r = ထိုဂြိုဟ်(သို့ ) ကြယ် ရဲ့အချင်းဝက် ။
ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာမြေကြီးက နေအဲ့လို လွတ်ထွက်သွားဖို့ အတွက် အသုံးပြုရတဲ့ V,escape ဟာ 11200 m/s ဖြစ်ပါတယ် (တစ်နာရီမိုင်ပေါင်းနှစ်သောင်းခွဲခန့် ) ။ Black Hole တွေဆိုရင် အဲ့လောက်ကြီး Mass များနေတဲ့ အတွက် သူတို့ အတွက်လိုအပ်တဲ့ Escape velocity ဟာအရမ်းကိုမြင့်ပါတယ် ။ဘယ်အရာဝ္ထုမဆို ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ဆွဲငင်အားစက်ကွင်းထဲကိုဝင်လာပြီဆို၇င် အဲ့ဒီအလျှင် တစ်နာရီမိုင်ပေါင်းနှစ်သောင်းခွဲခန့် မရှိဘူး ဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်ပြုတ်ကျလာမှာပဲ ။ Black Hole မှာလဲ အဲ့သဘောတရားပဲပေါ့ ။ တွင်းနက်ကြီးတွေရဲ့Escape Velocity ဟာကြီးလွန်းလို့အလင်းရဲ့ အလျှင်လောက်နဲ့ မလွတ်နိုင်ပါဘူး ။ စကြာဝဠာထဲမှာလဲ လက်ရှိကို အလင်းရဲ့ အလျှင်ထက်မြန်အောင်ပြေးနိုင်တာရှိသေးတော့ တွင်းနက်ရဲ့ဆွဲငင်အားကို ဘယ်အရာကမှ မကျော်လွန်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုသတိထားပါ ။ ဒီ Escape Velocity ညီမျှခြင်းဟာ ဆွဲငင်အား နဲ့ လှုပ်ရားတဲ့ဝတ္ထုတွေ ဥပမာ ခင်ဗျား အမြှောက်ပစ်တာမျိုး မှာပဲ သုံးပါတယ် ။ ဒုံးပျံလွှတ်တင်တဲ့အခါမှာတော့ အဲ့ Escape velocity နဲ့ သွားစရာမလိုပါဘူး ။ လုံလောက်တဲ့ ဆီ တွေ ၊ လွှတ်ထုတ်တဲံအားတွေကို ညှိပြီးတော့ သွားလို့ ရပါတယ် ။
ပုံ-၂းEscape Velocity ပြပုံ
မေးခွန်း (၅)းရီလေတီဗတီ သီအိုရီ ကို ဘယ်နေရာတွေမှာသုံးပါသလဲ ။
နေ့ စဉ်သုံးနေကြမှာ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားဖုန်းက Global Positioning System လို့ ခေါ်တဲ့ GPS မှာအသုံးပြုပါတယ် ။ အဲ့လောက်တင်မကပါဘူး ။ သင်္ဘောတွေ ၊ လေယဉ်တွေ ၊ စစ်တပ်တွေမှာအကုန်အသုံးပြုနေတဲ့ GPS တွေမှာ ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ ကို အသုံးပြုရပါသေးတယ် ။ ဘာလို့ ဆို General Relativity Theory အရ ဆိုရင် ဒြပ်ဆွဲအားများတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဝတ္ထုတွေ ထက် နည်းတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ ၀တ္ထုတွေ အတွက် အချိန်ကပိုမြန်ပါတယ် ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အချိန်ဟာ အာကာသ ထဲမှာ ရှိတဲ့ Satellite ပေါ်ကလူထက် အချိန်ပိုနှေးပါတယ် ။ အဲ့လို့ မြေပြင်နဲ့အာကာသ ကောင်းကင်ယံ မှာ ကွာခြားတဲ့အချိန်ကိုထဲ့မတွက်ဘူးဆိုရင် လေယဉ်တွေလဲပျောက်ကုန်၊ သင်္ဘောတွေလဲတိုက်ကုန် ပါလိမ့်မယ် ။ အဲ့ဒီတော့ Relativity Theory ဟာနေ့စဉ်ဘ၀မှာအလွန်အရေးပါတဲ့ သီအိုရီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ စွမ်းအင်-ဒြပ်ထု ညီမျှခြင်း ( E=mc^2 ) ကိုတော့ အနုမြူရူပဗေဒ (Nuclear Physics) မှာအသုံးပြုပါတယ် ။
မေးခွန်း (၆) ဘာလို့ ရီလေတီဗတီ နဲ့ ကွမ်တမ် ကိုခုထိ ဆက်စပ်လို့ မရသေးတာလဲ ။
ရီလေတီဗတီ ဆိုတာ အရမ်းကြီးမားတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို တွေးတောတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် ။ ဥပမာ ဂြိုဟ်တွေ ၊ ကြယ်တွေ ။ ကွမ်တမ် ကတော့ အလွန်သေးငယ်တဲ့အရာလေးတွေ ဥပမာ အက်တမ်အောက်အမှုန်တွေ မှာ အသုံးပြုပါတယ် ။ ဆင်ထီးနဲ့ ပုရွက်ဆိတ်မ ပါပဲ ။ ဦးရွှေရိုးဒေါ်မိုး သွား က ခိုင်းလို့ တော်တော်အဆင်မပြေပါ ။ အဲ့ထက်ပိုဆိုးတာ က ဆွဲငင်အား ကိုယူဆတဲ့သဘောပါပဲ ။ ယေဘုယျရီလေတီဗတီ အရ ဒြပ်ဆွဲအားဟာ အားမဟုတ်ပါဘူး။ Space-time ရဲ့ ကောက်ကွေးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခု ပါ ။ ကွမ်တမ် အရကျတော့ Graviton လို့ ခေါ်တဲ့ စွမ်းအင်ထုပ်လေးတွေ အလဲအလှယ်လုပ်လို့ ဖြစ်လာတာပါတဲ့ ။ ဒီသီအိုရီနှစ်ခုဟာလုံးဝ ဆန့် ကျင်ဘက်တွေပါပဲ ။ စူပါကြိုးမျှင်သီအိုရီ ကတော့ နှစ်ခုကို ချစ်ကြည်ရေးလုပ်ပေးတဲ့ သံတမံလေးလို့ ယူဆလို့ ရပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ခက်တာက အဲ့ကြိုးမျှင်သီအိုရီ က သက်သေပြလို့ လဲမရ ဘာလဲမရ ။ တွက်ထုတ်နိုင်လောက်အောင် အဆင့်မြင့်နေတဲ့သင်္ချာလဲမရှိသေး ။ ကြိုးမျှင် သီအိုရီ ဟာအရမ်းလှပပေမဲ့ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းလောက်ကို သူ့ ကိုတွက်ထုတ်နိုင်တဲ့ သင်္ချာ ကျွန်တော်တို့ မှာမရှိသေးပါဘူး ။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ဘယ်လိုဥပမာပေးကြလဲဆိုရင် ခင်ဗျား ကွန်ပျူတာတစ်လုံး ကို ၁၈ ရာစု က သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ကိုပေးကြည့်လိုက် ။ သူ ဟာ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပေါင်းနှုတ်မြှောက်စားလုပ်တတ်လိုက်မယ် ။ ဂိမ်းဆော့တတ်သွားမယ် ။ ဒါပေမဲ့ သူ ဟာ ကွန်ပျူတာဟာ ဘာလို့အလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတာ နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကွန်ပျူတာရဲ့ အခြေခံဖြစ်တဲ့ Programming ကိုသူတို့မသိကြလို့ ပါ ။ ထို့ အတူပဲ … String Theory မှာလဲ Maxwell ရဲ့အလင်းဆိုင်ရာ ညီမျှခြင်းတွေ …အိုင်စတိုင်းရဲ့ ဒြပ်ဆွဲအား ညီမျှခြင်းတွေ ဟာ လှလှပပ ပေါင်းစပ် ထွက်လာပေမဲ့ … ကျွန်တော်တို့ ဟာဘာလို့ ထွက်လာလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး ။ Extra Dimensions တွေကိုလဲ သက်သေပြလို့ မရသေးပါဘူး ။ 26-dimensions ဆိုတာ လဲ သက်သေပြမရသေး ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ပါ ။ Physics မှာ သီအိုရီတစ်ခုကို သင်္ချာနည်းအရ သက်သေပြလို့ ရမှသာ လက်ခံလို့ ရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် String Theory ကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ၂၂ ရာစု မှာမှ တွေ့ ၇မဲ့သီအိုရီ ကိုကျွန်တော်တို့ မတော်တဆ တွေ့ တာဆိုပြီး ပြောကြပါတယ် ။
မေးခွန်း (၇) အနာဂတ်မှာကော အလင်းထက်မြန်တဲ့ အလျှင်နဲ့ သွားလို့ ဖြစ်နိုင်မလား ။
အင်းးဗျ ဒါကတော့နဲနဲခေါင်းစားတဲ့မေးခွန်းပဲ ။ တော်တေ်ာပြောဖို့ ခက်ပါတယ် ။ Einstein ရဲ့အထူးရီလေတီဗတီ သီအိုရီ က လဲ ခုချိန်မှာ အမှုန်အရှိန်ပေးစက် တွေရဲ့ အဆုံးစွန် ဆုံး သောအခြေအနေတွေမှာတောင် မှန်ကန်နေတယ် ဆိုတော့ တော်တော်လဲပြောရခက်တယ် ။ အဲ့ တစ်ဖက်က တွေးကြည့်တော့လဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်တစ်ခုထဲမှာတောင် တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာ နဲ့ ရှာဖွေတွေ့ ရှိမှုတွေ က ကြောက်ဖို့ ကောင်းလောက်အောင် မြင့်မားနေပြန်တော့လဲ ခုအခြေအနေကြီးမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောဖို့ ကလဲခက် ။ လောလောဆယ်အခြေအနေထိတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါ ။ ဒါပေမဲ့ပြောလို့ မရဘူးလေ ။ တစ်နေ့ ကျတော့လဲ Einstein ကိုမှားကြောင်းသက်သေပြနိုင်တဲ့လူ၊ Einstein ထက်အများကြီးပိုတော်တဲ့လူတစ်ယောက် ပေါ်လာနိုင်တာပဲလေ ။ခုစာဖတ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေလဲဖြစ်ရင်ဖြစ် မှာပေါ့ ။မဟုတ်ဘူးလား? အဲ့ဒီတော့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောတာကတော့ သိပ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးဗျ ။
~Thaw Zin Htun
(Curiosity Science Magazine Year 1 – Issue7မှာထည့်ဖူးတဲ့ ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။)
Hawking, S. (1996).The illustrated A brief history of time (Updated and expanded ed.). New York: Bantam Books.
Hawking, S. (2001).The Universe inaNutshell. New York: Bantam Books.
ကိုတာ. (2011).သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်၏စာသင်ကျောင်း (1st ed.). Yangon: ၀င်းကျော်ထွန်း.
Tags: Physical Science
← ပန်းတွေဟာ ဘာအတွက်တည်ရှိနေတာလဲ
အက်တမ်များသည် ၄င်းတို့အား စောင့်ကြည့်နေသ၍ မရွေ့လျားကြပါ →